मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण भारी खेल मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर चेकआउट कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र समाचार प्रेस
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
योनि खमीर संक्रमण एक अपेक्षाकृत सामान्य र धेरै उपचारनीय अवस्था हो जुन धेरै महिलाहरूले सामना गर्छन्। यी संक्रमणहरू सामान्यतया को रूपमा चिनिने फंगल समूह को एक overgrowth को कारण हो कैन्डिडा अल्बिकान्स , जुन प्राय महिलाहरूको सामान्य योनी फ्लोरामा अवस्थित हुन्छ। जब केहि सर्तहरूले योनि क्यान्डिडा को बढि बढि अनुमति दिन्छ, यसलाई कैन्डिडिआसिस पनि भनिन्छ, यो लक्षणहरू हुन्छन् जसमा योनी कोमलता, खुजली, डिस्चार्ज, र / वा गन्ध समावेश हुन सक्छ। यस अवस्थाको संवेदनशीलताले धेरै महिलालाई छिटो र प्रभावकारी उपचार विकल्पको खोजीमा छोडिदिन्छ। मोनिस्ट्याट र डिफ्लुकन दुईवटा उपचार विकल्पहरू भल्भोभोजिनल क्यान्डिडिआसिसका लागि हुन्।
मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकान बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
मोनिस्ट्याट योनि खमीर संक्रमणको लागि एक ओभर-द-काउन्टर उपचार विकल्प हो। यो (माइक्रोनाजोल) ले एर्गोस्टेरॉलको उत्पादन घटाएर फ fun्गल संक्रमण लड्छ। यसले फg्गसको सेल भित्तामा नोक्सान पुर्‍याउँछ, फus्गसको लागि पोषकहरूको आवश्यक फस्टाउनको लागि यसलाई फल्काउन दिईन्छ।
मोनिस्ट्याट (मोनिस्ट्याट कूपन) विभिन्न प्रकारका उपचार संयोजनहरूमा आउँदछ जुन भित्रै र बाह्य अनुप्रयोगहरूको लागि योनी ovules (suppositories) र / वा योनि क्रीमहरू समावेश गर्न सक्दछ। त्यहाँ एक दिन, तीन-दिन, वा सात-दिन उपचार अवधिहरूको लागि उत्पादनहरू छन्। धेरै मोनिस्ट्याट (मोनिस्ट्याट के हो?) फॉर्म्युलेसनमा जेनेरिक विकल्पहरू उपलब्ध छन्। मोनिस्ट्याट उत्पादनहरूको काउन्टर प्रयोग १२ बर्ष भन्दा कम उमेरकाको लागि होईन।
डिफ्लुकन (फ्लुकोनाजोल) (डिफ्लुकान कुपन) खमीर संक्रमणको लागि पर्चेको उपचार हो जुन मोनिस्ट्याटको समान फेसनमा काम गर्दछ किनकि यसले एर्गोस्टेरॉलको उत्पादन घटाउँछ। सेल भित्ती झिल्लीलाई यसले नोक्सान पुर्‍यायो भने फ the्गलसलाई बाँच्न दिदैन। डिफ्लुकन (डिफ्लुकन भनेको के हो?) मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा mg० मिलीग्राम, १०० मिलीग्राम, १ 150० मिलीग्राम, र २०० मिलीग्राम क्षमतामा उपलब्ध छ। यो मौखिक निलम्बन र इंजेक्शन समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ। डिफ्लुकनको लागि पर्चा प्राप्त गर्न चिकित्सकद्वारा मूल्या requires्कन आवश्यक पर्दछ, र केहि अवस्थाहरूमा नमूनाको आवश्यक पर्दछ। डिफलुकन बच्चाहरू र वयस्क दुबैमा सिफारिस गर्न सकिन्छ।
मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकान बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग Azole antifungal Azole antifungal
जेनेरिक नाम के हो? माइकोनाजोल फ्लुकोनाजोल
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? योनि ovule (suppository) र क्रीम मौखिक ट्याब्लेट र निलम्बन, इंजेक्शन
मानक खुराक के हो? १,,, वा days दिनका लागि आन्तरिक र बाह्य योनी अनुप्रयोगको संयोजन १ mg० मिलीग्राम एक पटकको खुराकको रूपमा, वा हरेक अन्य दिनमा total कुल खुराक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? १-7 दिन १-१-14 दिन
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? महिला १२ बर्ष वा माथिका वयस्क वा बच्चाहरु डाक्टरको आदेश अन्तर्गत
डिफ्लुकानमा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहिन्छ?
डिफ्लुकन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
के छींकने र नाक बग्ने को लागी लिनुहोस्
मोनिस्टैट बनाम डिफ्लुकन द्वारा उपचार गरिएको अवस्था
मोनिस्ट्याट फार्मुलेसनहरू महिलाहरूमा भल्भोभाइनल कैन्डिडिआसिस (योनी खमीर संक्रमण) को उपचारको लागि हो जुन पहिले योनीको खमीर संक्रमणको रूपमा पत्ता लागेको थियो र बारम्बार लक्षणहरू थिए। मोनिस्ट्याट कसैको प्रयोगको लागि लक्षित छैन जसलाई योनि खमीर संक्रमणको साथ कहिले पनि निदान गरिएको छैन। जो महिलाहरू पहिलो पटक लक्षणहरू योनि खमीर संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो छन् तर निदान कहिल्यै गरिएको छैन पहिले एक चिकित्सकले मूल्या should्कन गर्नु पर्छ।
डिफ्लुकन योनी खमीर संक्रमणको उपचारको लागि पनि संकेत गरीएको छ तर अन्य स्वीकृत प्रयोगहरू छन् जसमा मूत्र पथ, पेट, मुटु, अन्ननलिका, मौखिक गुहा, रगत, र हड्डीमा क्यान्डिडा वृद्धि समावेश छ। नाखुर र खुट्टामा फgal्गल वृद्धिको उपचारमा डिफ्लुकन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका बिरामीहरूले फgal्गलको वृद्धिलाई रोक्नको लागि डिफ्लुकानसँग प्रोफेलेक्टिक उपचारबाट फाइदा लिन सक्दछन्। एउटा दुर्लभ अवस्था, क्रिप्टोकोकल मेनिन्जाइटिस, डिफ्लुकानको साथ पनि उपचार गर्न सकिन्छ। योनी खमीर संक्रमण को लागी एक डिल्कुकन उपचार अवधि एक देखि १ 14 दिन सम्मको उपचार इतिहास र बिरामीको संक्रमण जटिलताको आधारमा हुन सक्छ।
सर्त मोनिस्ट्याट डिफ्लुकन
योनि खमीर संक्रमण हो हो
Oropharyngeal कैंडिडिआसिस हैन हो
Esophageal कैन्डिडिआसिस हैन हो
Candiduria हैन हो
क्यान्डिडेमिया हैन हो
एन्डोकार्डिटिस हैन हो
क्रिप्टोकोकल मेनिन्जाइटिस हैन हो
कैन्डिडिआसिस प्रोफिलैक्सिस हैन हो
गँड्यौला शरीर tinea पेडिस, tinea versicolor हैन हो
Coccidioidomycosis हैन हो (अफ-लेबल)
के मोनिस्ट्याट वा डिफलुकन बढी प्रभावकारी छ?
मोनिस्ट्याट र डिल्कुकन योनी खमीर संक्रमणको लागि प्रत्येक प्रभावकारी उपचार विकल्प हो र विभिन्न तरिकामा तुलना गरिएको छ। केही महिलाहरूमा, योनि खमीर संक्रमण बारम्बार र दिक्क लाग्न सक्छ, र एक दिन उपचार विकल्प को सरलता सबैभन्दा आकर्षक लाग्न सक्छ। एक अध्ययन मा तुलना एकल खुराक उपचार मोनिस्ट्याट र डिब्लुकनको, डिस्लुकनसँग थोरै उच्च उपचार दरहरू भेटिए, प्रयोगशाला परीक्षणहरू र लक्षणात्मक सुधारबाट प्रमाणित, यद्यपि यी भिन्नताहरू सांख्यिकीय रूपमा महत्वपूर्ण थिएनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, मोनिस्ट्याट बिरामीहरूको%%% र डिल्कुकन बिरामीहरूको १०० %मा छोटो अवधिको क्लिनिकल उपचार हासिल गरियो। त्यसकारण, दुबै मोनिस्ट्याट र डिफ्लुकन योनी खमीर संक्रमणको लागि अत्यधिक प्रभावी उपचार विकल्पहरू हुन्।
योनि खमीर संक्रमणले ग्रस्त महिलामा महत्त्वपूर्ण रहेको एउटा कारक लक्षणहरू संकलन देखाउन चाँडो देखाउँछन्। योनि कोमलता, खुजली, र गन्ध एकदम कष्टकर हुन सक्छ, र यदि उपचार नगरिएमा छोडियो भने, अन्य जीवनशैली गतिविधिहरूलाई असर गर्न सक्छ। A अध्ययन २०१ 2015 मा प्रकाशित समयको तुलना योनीको खुजली, जलन, र जलनको लक्षणात्मक राहतसँग जब एक दिनको माइक्रोनाजोल संयोजन उपचार (१२०० मिलीग्राम अंडाशय + बाह्य क्रीम) वा एकल-खुराक फ्लुकोनाजोल १ mg० मिलीग्रामको साथ प्रणालीगत रूपमा उपचार गरिन्छ। यस अध्ययनको नतीजामा पत्ता लाग्यो कि माइक्रोनाजोलको साथ स्थानीय उपचारको परिणामस्वरूप एक घण्टामा कम्तिमा एउटा लक्षण राहत हुन्छ जुन प्रणालीगत फ्लुकोनाजोल उपचारको साथ चार घण्टामा। यसबाहेक, प्रणालीगत फ्लुकोनाजोल उपचारको साथ सोह घण्टाको तुलनामा स्थानीय माइक्रोनाजोल उपचारको साथ सबै लक्षणहरूलाई चार घण्टामा राहत दिइयो। लाक्षणिक राहत प्राप्त गर्न लाग्ने समय उत्तम उपचार कोर्स छनौट गर्दा महत्त्वपूर्ण कारक हुन्छ।
केवल तपाईको चिकित्सकले योनि खमीर संक्रमणको लागी निदान गर्न सक्दछ र निर्णय लिन सक्दछ कि तपाईलाई शुरुवाती र आवर्ती संक्रमणको उपचारमा कुन उपचार उत्तम हुन्छ।
कभरेज र मोनिस्टैट बनाम डिफ्लुकनको लागत तुलना
मोनिस्ट्याट एक ओभर-द-काउन्टर औषधि हो, र मेडिकेयर वा अन्य प्रिस्क्रिप्शन बीमा योजनाहरू द्वारा कभर हुन सक्दैन। मोनिस्ट्याटको खुद्रा लागत $ १$ देखि $ २ range सम्ममा निर्भर हुन सक्छ। तपाईको डाक्टरले मोनिस्ट्याट सल्लाह दिन सक्छ, तैपनि प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक छैन। एक प्रिस्क्रिप्शनको साथ, तपाईं मोनिस्ट्याट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ for १aसिंगलकेयर कूपनको साथ।
डिफ्लुकान केवल पर्चेबाट उपलब्ध हुन्छ र प्रायः मेडिकेयर र प्राय: अन्य बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। डिफ्लुकानको एकल १ mg० मिलीग्राम खुराकको औसत खुद्रा मूल्य around around० को आसपास छ। एकलकेयरबाट कुपनको साथ, तपाईं लगभग $ for को लागि जेनेरिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
मानक खुराक --दिन संयोजन प्याक एकल १ mg० मिलीग्राम खुराक
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे N / A < depending on coverage
एकलकेयर लागत $ 15- $ 19 । 7- $ 8
मोनिस्ट्याट र डिब्लुकनको साझा साइड इफेक्टहरू
मोनिस्ट्याट र डिस्कुलन सामान्यतया दुबै सहिष्णु छन्। मोनिस्ट्याट उत्पादनहरूका लागि सबैभन्दा सामान्य प्रतिकूल घटनाहरू जलन, जलन, र खुजली हुन्। यो योनी खमीर संक्रमण को लागी सम्बन्धित लक्षण देखि बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ।
डिफ्लुकनले बिरामीहरूको महत्त्वपूर्ण संख्यामा टाउको दुखाइको कारण हुन सक्छ। डिफ्लुकनका अन्य साइड इफेक्टहरूमा छाला रौं, चक्कर, र जठरांत्र असहिष्णुता समावेश हुन सक्छ।
यो साइड इफेक्टको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टले पूर्ण सूची र मोनिस्ट्याट र डिफ्लुकनको साइड इफेक्टको बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्न सक्छ।
स्थानीय जलन हो परिभाषित छैन हैन n / a
स्थानीय खुजली हो परिभाषित छैन हैन n / a
स्थानीय जलिरहेको हो परिभाषित छैन हैन n / a
टाउको दुखाई हैन n /aहो २-१-13%
छाला दाग हैन n /aहो दुई%
चक्कर हैन n /aहो १%
मतली हैन n /aहो २-7%
पेट दुख्ने हैन n /aहो २-%%
पखाला हैन n /aहो २-%%
स्रोत: मोनिस्ट्याट ( डेलीमेड ) डिफ्लुकान ( डेलीमेड )
ट्रामाडोल लिने कति समय पछि म हाइड्रोकोडोन लिन सक्छु
मोनिस्टैट बनाम डिफ्लुकानको ड्रग अन्तर्क्रिया
मोनिस्ट्याट सामान्यतया अन्य औषधिहरूको साथ लिन धेरै सुरक्षित हुन्छ। यस्तो सम्भावना छ कि माइक्रोनाजोल उत्पादनहरूको इंट्राभाजिनल प्रयोगले परिणामस्वरूप कोडामाइन (वारफेरिन) चयापचयमा हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत शोषण गर्न सक्छ, जसले वारफेरिनको प्लाज्मा स्तरमा वृद्धि गर्दछ। त्यसकारण, वारफेरिन लिने बिरामीहरूमा माइक्रोनाजोलको इंट्राभाजिनल प्रयोग सामान्यतया सावधानीको रूपमा सिफारिस गरिदैन।
डिफ्लुकन साइटोक्रोम पी-450० एन्जाइम उपप्रकार CYP2C19 को एक शक्तिशाली अवरोधक हो, साथ साथै उप प्रकारहरू CYP2C9 र CYP3A4 को एक मध्यम इनहिबिटर हो। यसले विभिन्न सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको परिणाम दिन्छ किनकि यी एन्जाइमहरूले अन्य धेरै औषधिहरूको प्रशोधन र अवशोषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। डिफ्लुकानले रगत पातलो, एन्टिबायोटिक, मौखिक गर्भनिरोधक, र अन्य सामान्यतया प्रयोग गरिने औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। थप रूपमा, डिफ्लुकनलाई क्युटी प्रोलॉन्गेसन, गम्भीर अनियमित हृदय तालको रूपमा चिनिने प्रतिकूल घटनासँग सम्बन्धित छ। जब डिफ्लुकन अन्य ड्रग्ससँग लिन्छ जुन QT विस्तारको कारण हुन्छ, तिनीहरूको प्रभावहरू हुन सक्छ र यो प्रभाव सम्भावित घातक हो। डिफ्लुकानको साथ लिईएको ड्रग्स जसको QT विस्तार प्रभाव बढाउन सकिन्छ अमियोडायरोन, एस्टिमिजोल, पिमोजाइड, क्विनिडाइन, क्विटापाइन, र एरिथ्रोमाइसिन।
तलको तालिकाले औषधि अन्तर्क्रियाको नमूना प्रदान गर्दछ, तर पूर्ण सूची हुन सक्दैन। एक चिकित्सा पेशेवरले थप जानकारी र अन्तर्क्रियाहरूको पूर्ण सूची प्रदान गर्न सक्दछ।
औषधि ड्रग क्लास मोनिस्ट्याट डिफ्लुकन
एस्ट्रोजेन हर्मोन / मौखिक गर्भनिरोधक हैन हो
हाइड्रोक्लोरोथियासाइड मूत्रवर्धक हैन हो
रिफाम्पिन एन्टिट्यूबिकुलर हैन हो
Phenytoin एन्टिकोनभल्सेन्ट हैन हो
Zidovudine एन्टिवाइरल हैन हो
थियोफिलिन PDE अवरोधक हैन हो
ग्लिपाजाइड एन्टिडाएबेटिक / सल्फोनीलुरेआ हैन हो
ट्याक्रोलिमस इम्युनोसप्रेसन्ट्स हैन हो
क्विनिडाइन एन्टिरिथ्यामिक हैन हो
मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकानको चेतावनी
पहिलो पटक योनि खमीर संक्रमणको लक्षण भोगिरहेका महिलाहरूले कुनै पनि उत्पादनको साथ उपचार सुरू गर्नु अघि निदानको पुष्टिको लागि आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ।
मोनिस्ट्याटले लेटेक्स उत्पादनहरूको अखण्डतामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र त्यसैले कन्डम वा डायाफ्राम जस्ता उत्पादनहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। मोनिस्ट्याटको प्रयोग गर्दा तपाईले अन्य योनी उत्पादनहरू जस्तै टेम्पन, डुचेस, वा शुक्राणुनाशकहरू प्रयोग गर्नबाट अलग रहनु पर्छ। मोनिस्ट्याट उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा योनि सम्बन्धी सिफारिश गरिदैन। मोनिस्ट्याट उत्पादनहरूले छालाको संवेदनशीलतालाई निम्त्याउन सक्छ जस्तै खुजली, जलन, र जलन। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने मोनिस्ट्याट प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ।
डिफ्लुकन दुर्लभ, तर गम्भीर, कलेजोको क्षतिसँग सम्बन्धित छ र पूर्व-अवस्थित हेपाटिक रोग भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। डिक्टरलुकानमा हुँदा तपाईको डाक्टरले तपाईको कलेजो एन्जाइमहरूको निगरानी गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाई यसमा उपचारको विस्तारित अवधिको लागि हुनुहुन्छ भने। एक जीवन धम्की एलर्जी प्रतिक्रिया को दुर्लभ मामिलाहरु, जो anafhylaxis को रूप मा पनि चिनिन्छ, डिस्लुकानमा रिपोर्ट गरिएको छ। डिफ्लुकनलाई गर्भावस्थामा बेवास्ता गर्नुपर्छ, विशेष गरी पहिलो त्रैमासिक।
मोनिस्ट्याट बनाम डिफ्लुकनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
मोनिस्ट्याट भनेको के हो?
मोनिस्ट्याट योनि खमीर संक्रमणको लागि एक अति-काउन्टर उपचार हो। यो बिभिन्न उपचार विकल्पहरूमा उपलब्ध छ जसमा योनी अण्डार र क्रिमहरू समावेश छन्। मोनिस्ट्याटको साथ उपचार अवधि एक, तीन, वा सात दिनहरू रोजिएको उत्पादनमा निर्भर हुन सक्छ।
डिफ्लुकन भनेको के हो?
डिफ्लुकन यो औषधी हो जुन योनि खमीर संक्रमणको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ, साथै अन्य फ fun्गल संक्रमणको विभिन्न प्रकार। यो मौखिक ट्याब्लेट वा समाधानको रूपमा, साथै एउटा ईन्जेक्शनको रूपमा उपलब्ध छ। योनि खमीर संक्रमणको उपचार संक्रमणको जटिलताको आधारमा एकदेखि चौध दिनसम्म हुन सक्छ।
के मोनिस्ट्याट र डिब्लुकन एकै हो?
जबकि दुबै मोनिस्ट्याट र डिफ्लुकन एन्टिफंगल औषधी हो योनी खमीर संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिने, तिनीहरू समान छैनन्। मोनिस्ट्याट प्रिस्क्रिप्शन बिना खरीदको लागि उपलब्ध छ र योनि क्षेत्रमा स्थानीय रूपमा प्रयोग गरिन्छ। डिफ्लुकन एक पर्चेको औषधि हो र मौखिक रूपमा प्रणालीगत शोषणको लागि लिइन्छ।
के मोनिस्ट्याट वा डिस्लुकन राम्रो छ?
मोनिस्ट्याट र डिफलुकन दुबै योनि खमीर संक्रमणहरूको लागि प्रभावकारी उपचारहरू हुन्। मोनिस्ट्याटले लक्षणहरूको द्रुत रिजोलुसन प्रदान गर्न सक्छ जस्तै खुजली, जलन, र जलन। डिफ्लुकानको योनि क्यान्डिडिआसिस बाहेक फgal्गल संक्रमणको अधिक व्यापक प्रयोग छ।
के म गर्भवती हुँदा मोनिस्ट्याट वा डिस्लुकन प्रयोग गर्न सक्छु?
डिभ्लुकन गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्नु हुँदैन। सामान्यतया, मोनिस्ट्याट जस्ता स्थानीय एन्टिफंगलहरू, गर्भवती हुँदा योनि खमीर संक्रमणको उपचार गर्न रुचाइएको उत्पादनहरू हुन्। गर्भवती भएको बेला मोनिस्ट्याट उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
म रक्सीको साथ मोनिस्ट्याट वा डिफ्लुकन प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सी मोनिस्ट्याट वा डिफ्लुकानसँग या त contraindates छैन। डिफ्लुकानमा हुँदा मदिरा सेवन गर्नु भन्दा पहिले तपाईले आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ किनकि यो दुर्लभ हेपाटाटोक्सिसिटीको कारणले परिचित छ। नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्ने बिरामीहरूलाई कलेजो बिग्रने जोखिमको खतरा हुन सक्छ।
के मोनिस्ट्याटले डिफुलकन भन्दा राम्रो काम गर्दछ?
मोनिस्ट्याट र डिब्लुकनले योनी कैन्डिडिआसिसको लागि त्यस्तै प्रभावकारी उपचार दरहरू देखाएका छन्। मोनिस्ट्याटले स्थानीय लक्षणहरूको समाधान प्रदान गर्न देखाइएको छ जस्तै डिज्लुकन भन्दा चाँडो खुजली, जलन, र जलन।
के म फ्लुकोनाजोल र मोनिस्ट्याट सँगै प्रयोग गर्न सक्छु?
मोनिस्ट्याट र फ्लुकोनाजोल प्रत्येकले स्वतन्त्र रूपमा योनी खमीर संक्रमणको संकल्प प्राप्त गर्दछन्। माइकोनाजोलले इंट्राभागीनाली प्रयोग गर्‍यो केही प्रणालीगत शोषणको परिणाम र मौखिक, प्रणालीगत रूपमा अवशोषित फ्लुकोनाजोलसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। यी औषधीहरू तपाइँको चिकित्सकको सहमति र अनुगमन बिना सँगै प्रयोग गर्नु हुँदैन।
डिफ्लुकनले काम गर्न कति समय लाग्छ?
डिफ्लुकानले hours घण्टामा लक्षणहरूको समाधान गर्न थाल्छ, जसमा पूरा समाधानको साथ १ unc घण्टामा असम्भव मामिलाहरूको लागि। अधिक जटिल केसहरू वा दोहोरिएको संक्रमणलाई पूर्ण रिजोलुसन प्राप्त गर्न लामो समय अवधिमा उपचार अवधिहरू आवश्यक पर्दछ।
xanax लाई हिट हुन कति समय लाग्छ?
के गर्ने जब तपाइँ ह्या hang्गओभर हुनुहुन्छ
के कोकेन को लागी एक गलत सकारात्मक कारण हुन सक्छ
कसरी औषधि बिना एक uti बाट छुटकारा पाउन